Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga qoxootiga Ogadeniya ( O.R.C ) oo shir heer caalami ah ku qabtay Magaalad Nairobi
Gudiga qoxootiga Ogadeniya ( O.R.C ) oo shir heer caalami ah ku qabtay Magaalad Nairobi
Posted by ONA Admin	/ December 4, 2011
Waxaa maanta oo Axad ah 04dii Dec lagu qabtay magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya Shir ay soo qaban-qaabiyeen gudiga qoxootiga Ogaadeeniya oo sanadihii oogu danbeeyey ka shaqaynayey siday oga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka haysta Qoxootiga Ogaadeeniya marka ay ka gudbayaan xuduudaha Ogaadeeniya ay u cararayaan wadamada dariska la’ah Ogaadeeniya Sida Kenya, Soomaaliya, Djabuuti. Ujeedada uu Gudiga u qabtay shirkan maanta ayaa ahaa siday u cadeyn lahaayeen xuquuqada qoxootiga Ogaadeenya ee ku nool dalka Kenya.
Waxaa goobjooga ka ahaa TV-yada dalka Kenya oo ay kamid yihiin KMB TV, K24 TV, NT TV. Sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa saxaafad Soomaalida iyo boqolaal ka tirsan muwaadiniinta u dhalatay Ogaadeeniya oo qoxooti ku ah dalka Kenya.
Ugu horeyn waxaa shirka khudbad dheer ka jeediyey Gudoomiyaha Hay’ad Qoxootiga Ogaadeeniya Axmed Farax Maxamuud oo ka hadalay xidhiidhka Hay’ad Ogaden Refugee Commutee iyo Xafiiska UN ta ee magaalad Nairobi. Wuxuu sheegay gudoomiyaha inay ka bexeen xiligii itoobiya ay sheegi jirtay in ayna haysanin dhibaato muwaadiniinta Ogaden ay ooga soo cararaan dalka Ogaden. Axmed oo ka hadalayey arimhaas ayaa yidhi; “Waxaa jirtay in muwaadiniinta Ogaadeeniya ee Kenya ku soo qaxa loo qori jirey in ay yihiin Soomaali loona diidi jirey in loo diiwaan galiyo inay yihiin qoxooti Ogaadeeniya, taasoo Itoobiya ay ku cadaadin jirtay hay’adaha iyo cid walba oo isku dayda in qoxootiga Ogaadeenya xaaladooda la fiiriyo. Lixdii sanee oogu danbaysa ayaa markii la helay boqolaal qoyes oo diiday in ay badalaan dhalashadooda muwaadinimo diidayna inay sheegtaan inay Soomaaliya ka soo carareen ayay suurogal noqotay in la helay xuquuqdii qoxootinimo ee dadkanagu lahaayeen”
Axmed wuxuu sheegay in dilal iyo hanjabaado intaba loo gaysto dad Qoxootiga Ogadenya ayna dhamaan Hay’adaha ay arrintaasi khusayso kala hadaleen.
Waxaa kaloo shirka ka Hadley Cabdulaahi Xaliye oo kamid ah muwaadintiinta Ogaadeniya ee mudada dheer xabsiga ku jirey oo sheegay in mudo 10 sano ah uu xabsi ku jirey soo dayntiisana ay ka qayb qaadatay hay’ada ICRC oo mudo dheer dabo socotay kiiskiisa. Waxaa iyadana shirka ka hadashay Sugra Fiili oo ah Hooyo lagu soo dhibaateeyey xabsi ku yaala magaalad Sagag ee gobolka Nogob. Warbixnta Sugra oo aad u dheereyd ayey ku sheegtay in ay xabsiga magaalad Sagag ku dhashay ilmo. “Waxaan xabsiga ka soo baxay iyada oo ehelkaygii ay iga samreen oo la’igu tireyey dadkii xabsiyada ku dhintay in aan ku jiro” ayay tidhi Sugra. Iyadoo raacisay’ “Waxaa wali xabsiyada ku jira gabadho badan kuwaas maalin walba lagu ciqaabo xabsiyada”.
Waxaa Shirka lagu soo bandhigay Sawiro iyo muuqaalo ka turjumaya xadgudub lagu sameeyey muwaadiniin u dhalatay Soomaalida Ogaadeenya oo ku noolaa dalka Kenya kuwaas oo qaarkooda lagu fuliyey falal xun xun sida Cabdirisaaq Tiibaa, Cabdi Cabdulaahi iyo Kamas dhabar oo dhamaantooda lagu dilay Kenya iyaga oo haysta warqadaha aqoonsiga qoxootiga taas oo muujineysa in itoobiya ayna qadarineynin nidaamka caalamiga ah iyo midka Qaramada midoobay.
Ugu dambeeyntii gudoomiyaha gudiga qaxootiga Ogaadeenya ee Kenya Axmed Faarax Maxamuud ayaa sheegay in dhibaatada dadka Ogaadeenya ka soo jeeda ku haysta dalka Kenya ay tahay mid aad looga argagaxo, waxaana uu sheegay in dad badan loogu goodiyay in la dilli doono, waxaana qaarkood laga soo wacay gudaha dalka Ethiopia.
Dowlada Kenya ayuu ku tilmaamay meel ay demuqraadiyad ka jirto, waxaana uu muwaadiniinta reer Ogaadeenya ugu baaqay inay niyadooda dajiyaan oo ay sharciga dalkan ay ku noolyihiin ixtiraamaan iyagoo xuquuqdoodana si sharci ah ku raadsnaya.